MEMORY! ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှ မျိုးဆက်သစ် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သူများအတွက် ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းများနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိစေရန် ပြင်ဆင်၍ ကူညီပံ့ပိုးပေးမည် - YOYARLAY Digital Media and News
ယခုနှစ်တွင် MEMORY! ပွဲတော်အနေဖြင့် ကျန်းမာရေး အကျပ်အတည်းများကြောင့် MEMORY နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကဏ္ဍ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်သော လူအများ စုဝေး၍ ရုပ်ရှင်များ ပြသခြင်းကို ကျင်းပပြုလုပ် နိုင်တော့မည် မဟုတ်ဘဲ အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ၂ဝ၂၁ ခုနှစ်တွင်သာ ပြန်လည်ပြုလုပ်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ သို့သော် MEMORY! ပွဲတော်အနေဖြင့် ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သော နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်များကို နမူနာယူ၍ ဂုဏ်သရေ အရှိဆုံးသော နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်များမှ ပညာရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပိုမို အင်အားကောင်းလာသော Myanmar Script Fund (MSF) ကို အစဉ်အလာမပြတ် ဆက်လက်ပံ့ပိုးကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။
MSF ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ နောင်လာမည့် မျိုးဆက်သစ် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သူများကို လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးရန်နှင့် မိမိတို့၏ အရည်အချင်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြု ဖန်တီးပြသနိုင်စေရန်ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်တွင် ဤအစီအစဉ်ကို အွန်လိုင်းပေါ်တွင်သာ သီးသန့်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကာ နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း ပညာရှင်များမှလည်း Project တင်ပြချက်များနှင့်တကွ လမ်းညွှန်ပြသပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
“MSF ကို လေးကြိမ်မြောက် ကျင်းပပြီးတဲ့အခါမှာတော့ MSF ဟာ တော်တော်လေး တိုးတက် လာတယ်ဆိုတာကို မြန်မာ ရုပ်ရှင် Project တွေ နိုင်ငံတကာစျေးကွက်နဲ့ ပွဲတော်တွေမှာ ဆုတွေ အများကြီးရပြီး ရွေးချယ်ခံရတာကို ကြည့်ရင် သိသာ ပါတယ်။ အခုလို မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း အပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ အရှိန်အဟုန်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ အတွက် ဒီလို ကောင်းမွန်စွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ MSF အစီအစဉ်ကို မရပ်တန့်သွားစေဖို့ အင်မတန်မှ အရေးကြီး ပါတယ်” ဟု ရုပ်ရှင်မင်းသမီး၊ ထုတ်လုပ်သူနှင့် MEMORY ပွဲတော်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် အဓိက ကူညီပံ့ပိုးပေးသူတစ်ဦး ဖြစ်သော ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ၅ ကြိမ်မြောက်ကျင်းပမည့် Myanmar Script Fund (MSF) Online အစီအစဉ်ကို ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း၏ အဓိက ကျသော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည့် Cannes Festival Cinéfondation (ပြင်သစ်), Locarno Festival Open Doors (ဆွစ်ဇာလန်), Rotterdam Festival Hubert Bals Fund (နယ်သာလန်), Cannes Festival Semaine de la Critique (ပြင်သစ်),Torino Film Lab (အီတလီ), Ties That Bind (ဥရောပလုပ်ငန်းစု), CNC French Film Commission (ပြင်သစ်), Autumn Meetings (ဗီယက်နမ်), Busan Festival Asian Project Market (ကိုရီးယား), LIM Groupe Ouest (ပြင်သစ်), La Fabrique Cinéma (ပြင်သစ်) အဖွဲ့အစည်းများကလည်း အားတက်သရော ပူးပေါင်းပါဝင် ကူညီကြမည်ဖြစ်သည်။
၅ ကြိမ်မြောက်ကျင်းပမည့် MSF 2020 Online အစီအစဉ်တွင် Project အသစ်များအတွက် MSF Original နှင့် MSF တွင် ပါဝင်တက်ရောက်ဖူးသူများအတွက် MSF Advanced ဟူ၍ ကဏ္ဍ ၂ ခု ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ကဏ္ဍ ၂ ခုလုံးအတွက် လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်များက စတင်ခေါ်ယူခဲ့သည့် အွန်လိုင်းလျှောက်လွှာများမှ တစ်ဆင့် ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီအလိုက် ရွေးချယ်ခံရသူများကို နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ကြေညာသွားမည်ဖြစ်သည်။
Myanmar Script Fund ကို MEMORY Cinema အဖွဲ့အစည်း၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ MSF အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်နေသော ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းများအတွက် အရည်အချင်း ရှိသူများကို ရှာဖွေ ပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ ရုပ်ရှင် Project ၃ဝ နီးပါးတွင် ကိုယ်စားပြုပါဝင်ခဲ့သော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသူပေါင်း ၇ဝ ကျော်ကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ MSF 2020 ယှဉ်ပြိုင်မှုအပြီးတွင် ရွေးချယ် ခံရသူများသည် နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ရုပ်ရှင် စီမံကိန်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အရေးပါသည့် နိုင်ငံတကာ ပလက်ဖောင်းများတွင် လျှောက်လွှာတင်ခြင်းကဲ့သို့သော အစီအစဉ်များကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
MSF အစီအစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြင်သစ်သံရုံး၊ ဆွစ်ဇာလန်သံရုံးနှင့် ဆွစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပူးပေါင်းရေးအဖွဲ့ (SDC)၊ ဥရောပသမဂ္ဂ (European Union Delegation in Myanmar)၊ CNC (Center National du Cinéma et de l’image animée)၊ Arte၊ အမေရိကန်သံရုံး၊ Locarno Festival-Open Doors နှင့် Forever Group တို့မှ ကူညီပံ့ပိုးပေးထားသည်။
MEMORY! ရုပ်ရှင်ပွဲတော်နှင့် ၅ ကြိမ်မြောက်ကျင်းပမည့် MSF 2020 Online အစီအစဉ် အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြပါ Facebook Page မှ တစ်ဆင့်လည်း https://www.facebook.com/memoryfilmfestivalyangon/ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု နိုင်သည်။
Previous Previous post: ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ချင်ရင် ဒါတွေစားပါ
Next Next post: မလိုအပ်ဘဲ ဖုန်းကြည့်ရှုချိန်များပြားနေခြင်းအား Viber မှ ကူညီလျှော့ချပေးနိုင်